Jaaliyadaha Dibada Ee Reer Itoobiya Oo Si Kulul U Canbaaraysay Isku Daygii Fashilmay Ee Kooxaha Ginbot 7, Shacbiya Iyo Hadhaagii Dergiga. - Cakaara News
Jaaliyadaha Dibada Ee Reer Itoobiya Oo Si Kulul U Canbaaraysay Isku Daygii Fashilmay Ee Kooxaha Ginbot 7, Shacbiya Iyo Hadhaagii Dergiga.
Jigjiga(CN) Jimce.Mar.13.2015, ilaha war-qabadka ee shabakada CakaaraNews ayaa waxaa kusoo dhacaya fariimo nagasoo gaadhaya jaaliyaadka dibadaha ee Reer Itoobiya kuwaas oo xanbaarsan baaq isugu jira canbaarayn iyo taageero.
Wararka ka imanaya jaaliyaadka oo aan gooni gooni idiin ku soo gudbin doono ayaa xanbaarsan baaqyo kasoo baxay isku daygii fashilmay ee ay sameeyeen kooxihi Ginbood 7, Derg, iyo shacbiya kuwaas oo madaxwaynaha DDSI iyo waftigiisa kula kacay isku dey fashilmay.
Fariimahan Qurbajoogta iyo jaaliyaadkooda naga soo gaadhaya ayaa isugu jira qoraalo si kulul u canbaaraynaya ninkii kasoo jeeday sadexda kooxood ee Dergiga, Ginboo 7 iyo shacbiya. Sidoo kale Jaaliyaduhu waxay soo gud binayaan qoraalo muujinaya taageerada wayn loo qabo DDSI iyo isbadalka shantii sano ee u danbaysay lagaadhay horumarka iyo nabadgaliya taasoo ay horseed u yihiin hogaaminta DDSI ee uu ugu horeeyo madaxawynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Jaaliyaduhu waxay sheegeen in ay aad ugu bogeen sida cilmiyaysan ee uu madaxwayne Cabdi Maxamuud cashirka ugu dhigay isku daygii dhicisoobay ee mekonan getachew oo sida ayyga u qaylinayay islamarkaana policeku gacanta ku dhigay.
Arintan ayay jaaliyaduhu sheegayaan in ay meherad naf lacaarid ah u tahay kooxahan oo hada kahorna isku dayay in madaxda dawlada federaalka ay muuqaalo kaduubtaan si sharci daro ah iyagoo si shaqsi ahaan ah u adeeganaya. Kooxahan isugu jira ginbood 7, duugii dergiga, iyo shacbiya ayaa la ogsoon yahay in ay ka xunyihiin isbadalkan cadaalada iyo horumarka qoomiyadaha Itoobiya ay kunaaloonayaan maanta.
Qoraalada nasoo gaadhaya ayaa waxaa kamida hadal qoraalo hal ku dhag looga dhigay "qaylada ayyga ee duugii dhargiga iyo kooxahan shacbiya waxba mayeeli karaan isbadalkan wayn ee ay maanta gaadheen qoomiyadahah reer Itoobiya."
Jaaliyaadkan oo ay ka mid yihiin jaaliyada Maraykanka, Canada, Germany, Sweden, Denmark, Ururada SEDYO, DEYSE, Ururada HAWEENKA iyo Qaarkaloo badan oo aan dib idiinku soo gudbin doono qoraaladooda.